Maraykanka, 22 September 2017
Khamiis 22 September 2017
Maraykanka: Qaadhaan loo Ururinayo Dadkii Duufaantu ku Dhacday
Qaar ka mida xiddigaha ugu caansan dalkan Maraykanka ayaa xalay qabtay kulan ballaadhan oo ay lacag ugu ururinayeen dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay duufaantii Harvey iyo Irma.
Maxkamad Sare oo Maamulka Trump u Ogolaatay Xayiraaddii Qaxootiga
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u soo saartay amar u ogolaanaya maamulka madaxweyne Trump in uu sii wado siyaasaddiisa xakameyneysa qaxootiga, taas oo meesha ka saartay xukunka maxkamad hoose oo u ogolaan lahaa qaxootiga qaar inay waddanka soo galaan isla maanta oo Talaado ahba.
Maraakiib Loo Diray Florida
Aqalka Cad ee looga arrimio Mareykanka ayaa sheegay in gurmadki ugu ballaarnaa abid uu milatariga Mareykanka sameeyo ay hadda ciidamu ka wadaan meelaha ay saameysay duufaanta Irma ee Gobolka Florida iyo dalalka Caribbean-ka.
IRMA oo la Filayo inay Florida ku Dhufato
Dadkii deganaa magaalada ayaa ka qaxay, balse dadka ku harey ayaa waxaa ka mid ah Dr. Qaali Cabdalla Xuseen oo ah dhaqtar qaliin, kana howlgasha Isbitaalka magaaladasi ee Balake Medical Centre, halkaas oo shaqaalaha heegan buuxa la galiyey.
Maraykanka oo Doonaya in K. Woqooyi la sii Cunaqabateeyo
Codsigan oo Jimcihii shalay uu gudbiyey hawlgalka Maraykanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku baaqaya in dalka K. Wqooyi laga joojiyo saliidda, gaaska dabiiciga ah iyo waxyaabaha kale oo batroolka la xiriira ee dalkaas laga iibiyo.